သင်ဒီမှာပါ: Home / ရေ Solutions / ရေသွင်းခြင်း / သင့်ရဲ့မြေရေရန်လိုအပ်ပါတယ် - Walk ရန်အဘယ်သူမျှမလိုအပ်နေသောူပည်သူရုံသင့် Pump Call!
21 / 05 / 2015 By ရော်ဂျာ Pilon 98 မှတ်ချက်
nano Ganesh ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး မှ Prasad Ostwal
ထို့နောက်ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦး 1981 မစ္စတာ Ostwal အတွက်, မိမိနွေရာသီအားလပ်ရက်ကာလအတွင်း Pune အနီးတွင်သူ့မိသားစုရဲ့ရွာသွားရောက်ခဲ့သည်။ တိုင်းသန်းခေါင်, သူ့ 82 နှစ်အရွယ်အဘိုး (gangrene တစ်ဦးခြေထောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးချောင်းကိုနှင့်အတူသွားလာခဲ့သော) မိမိလိမ္မော်သီးနောက်တစ်နေ့နံနက်တင်ပို့ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်ရေစုပ်စက်ပေါ်ပြောင်းတစ်မိုင်လမ်းလျှောက်လိမ့်မယ်။ အဆိုပါရေနှင့်လျှပ်စစ်ပေးဝေရေးအပြောင်းအလဲမြန် (နှင့်နေ့အချိန်၌နေစဉ်အတွင်းစက်မှုခါးပတ်မှခွဲဝေ) ခဲ့ကြကတည်းကသူတကျိပ်ထိုကဲ့သို့သောခရီးစဉ်တညဉ့်မှတက်ပါစေလိမ့်မယ်။ မစ္စတာ Ostwal ကသူ့အဖိုးကိုကူညီမယ့်နက်ရှိုင်းသောအလိုဆန္ဒခံစားခဲ့ရပေမယ့်ကျောင်းသားတစ်ဦးအဖြစ်ကအကြောင်းဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘူး။
သင်တစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်သေတ္တာ (အ Nano Ganeh) မှတက်ချိတ်သောဆယ်လူလာခေါ်ပါ
သည်းခံခြင်း, ပြဌာန်းခွင့်နှင့်ကကမ္ဘာကြီးကိုပိုကောင်းတဲ့နေရာအရပ်လုပ်ယူသောအရာကိုမယ့်တစ်ဦးမစ်ရှင်အတွက်နက်ရှိုင်းသောယုံကြည်ချက်။ Bravo မစ္စတာ Santosh Otswal!
1 အခွအေန - တောင်သူများဆည်မြောင်းပန့်များစတင်နိုင်ရန်ရှည်လျားသောအကွာအဝေးလမ်းလျှောက်ဖို့လိုအပ်တယ်
2 စိန်ခေါ်မှု - အဝေးမှရေပန့်များဖြစ်ပေါ်ဖို့လမ်းကိုရှာပါ
3 ဖြေရှင်းချက် - ဆည်မြောင်းပန့်များစတင်နိုင်ရန်ရိုးရှင်းတဲ့ gadget ကကိုသုံးပါ
အခွအေန - တောင်သူများဆည်မြောင်းပန့်များစတင်နိုင်ရန်ရှည်လျားသောအကွာအဝေးလမ်းလျှောက်ဖို့လိုအပ်တယ်
အိန္ဒိယတွင်ရေစုပ်စက်ထက်ပို 1 ဘီလီယံအထိအရာရှိတဦးကဆက်သွယ်မှုရှိပါတယ်
စိန်ခေါ်မှု - အဝေးမှရေပန့်များဖြစ်ပေါ်ဖို့လမ်းကိုရှာပါ
ထိန်းချုပ်မှုပန့်များ remotly တစ်ခုစီးပွားရေးနည်းလမ်းရှာ
ဖြေရှင်းချက် - ဆည်မြောင်းပန့်များစတင်နိုင်ရန်ရိုးရှင်းတဲ့ gadget ကကိုသုံးပါ
လျှပ်စစ်မီးကြီးမားငွေပမာဏကိုကယ်တင်, ရေ, လောင်စာဆီ, အချိန်နှင့်လုပ်အား
ထုတ်လုပ်သူဆိုက်ကို - nano Ganesh
The Story Behind The Invention – ကို "ခေါ်ဆိုအဆိုပါ Pump" စက်ပစ္စည်း၏ Santosh Ostwal တီထွင်သူများအတွက်မေးခွန်းလွှာ
ဗီဒီယိုကို - အဆိုပါခေါ်ဆိုမှု-Your-Pump စက်ပစ္စည်း
Hai က ကပြောပါတယ်
Heya ဈဒီမှာမူလတန်းအချိန်ဖြစ်၏။ ငါသည်ဤအမှတ်မထင်
Quest စျေးပေါ 2019 ကူပွန်တားမြစ် ကပြောပါတယ်
Halina Sheard ကပြောပါတယ်
ပြတင်းပေါက်အတွက်အကူအညီရရန်မည်သို့ 10 ကပြောပါတယ်
Prednazone Acheter Viagra Authentique Acheter Viagra Qualite ကပ် Brand Name Viagra By Pfizer Doryx Bacterial Infections Free Shipping
Lakseolie til hund ကပြောပါတယ်
ငါးချိန်းတွေ့ site ၏ပဒေသာ ကပြောပါတယ်
Kléber Leite ကပြောပါတယ်
Cristina Boner ကပြောပါတယ်
Grupo Coral ကပြောပါတယ်
Juiz Mauro Pereira Martins ကပြောပါတယ်
အစဉ်အဆက်ကိုဖန်ဆင်း PlayStation42019 အကောင်းဆုံးဂိမ်း ကပြောပါတယ်
Mauro Pereira Martins cunhado ကပြောပါတယ်
Daniel Vesely ကပြောပါတယ်
Daniel Dantas ကပြောပါတယ်
Leandro Martins de Almeida ကပြောပါတယ်
ps4 games 2015-16 ကပြောပါတယ်
Juiz Mauro Pereira ကပြောပါတယ်
hamilton dias de souza ကပြောပါတယ်
Rodrigo Branco ကပြောပါတယ်
GameFly အခမဲ့အစမ်း ကပြောပါတယ်
Renan Batista ကပြောပါတယ်
ငါက bookmark လုပ်ထားတဲ့။
Usa Propecia cialis စျေးအသက်သာဆုံးအွန်လိုင်းစျေးနှုန်းများ Buy Metformin No Persciption Effects Of Homeopathic Amoxicillin On Pets
Lisa ကို ကပြောပါတယ်
Lélio Vieira Carneiro Júnior ကပြောပါတယ်
ယနေ့ငါအွန်လိုင်း4နာရီထက်ပို surfing ပြီဖြစ်သော်လည်း, ငါဥစ္စာနဲ့တူမဆိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဆောင်းပါးတွေ့ရှိခဲ့ပေ။
21 / 04 / 2015 By ရော်ဂျာ Pilon 493 မှတ်ချက်